Podcast 9 × 04: Ny iPhone X dia mampihoatra ny iPhone 8 | Vaovao IPhone
Podcast 9 × 04: Ny iPhone X dia mampihoatra ny iPhone 8
Amin'ity herinandro ity sy ny podcast ataonay dia mamakafaka ny iPhone 8 sy 8 Plus izahay, ireo finday finday vaovao Apple izay na eo aza ny dingana iray ambanin'ny iPhone X dia mahazo famerenana tena tsara, izy ireo dia nomena isa ho finday miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra eny an-tsena. Na izany aza, toa miandry ny iPhone X ny mpampiasa izay anananay fisalasalana betsaka momba izay ho tahiry voalohany. ary rehefa afaka mihazona ireo singa voalohany isika. Izany rehetra izany sy ny maro hafa amin'ity herinandro ity tao amin'ny podcast anay.
Ho fanampin'ny vaovao sy ny hevitra momba ny vaovaon'ny herinandro, hamaly ireo fanontaniana avy amin'ny mpihaino antsika koa isika. Hanana ny tenifototra #podcastapple miasa mandritra ny herinandro izahay ao amin'ny Twitter mba hahafahanao manontany anay izay tadiavinao, manome sosokevitra anay na izay rehetra tonga ao an-tsaina. Ny fisalasalana, fampianarana, hevitra ary famerenana ny fampiharana, na inona na inona dia manana toerana amin'ity fizarana ity izay hibodo ny tapany farany amin'ny podcast anay ary tianay ianao hanampy anao hanao isan-kerinandro.
Toy ny tamin'ny vanim-potoana hafa, ity podcast iPhone Actualidad ity dia azo arahana mivantana ihany koa fantsona YouTube anay ary mandray anjara amin'izany amin'ny alàlan'ny chat miaraka amin'ny ekipa Podcast sy ireo mpijery hafa. Misoratra anarana amin'ny fantsonay handraisana fampandrenesana hoe rahoviana no manomboka izy io ny firaketana mivantana ny podcast, ary koa rehefa manampy horonantsary hafa izay avoakanay ao izy. Mazava ho azy fa hijanona ho hita ao ihany koa izy io iTunes mba hahafahanao mihaino azy isaky ny te hampiasa ny fampiharana Podcast tianao indrindra ianao. Manoro hevitra anao izahay hisoratra anarana amin'ny iTunes mba hisintona ho azy ireo fizarana raha vantany vao misy izy ireo. Te handre azy eto ve ianao? Etsy ambany fotsiny dia manana ny mpilalao hanao azy ianao. Manana lisitry ny playlist ao amin'ny Apple Music koa izahay miaraka amin'ny mozika izay maneno ao amin'ny podcast.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 9 × 04: Ny iPhone X dia mampihoatra ny iPhone 8